फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - प्रचण्डलाई धन्यवाद
प्रचण्डलाई धन्यवाद लक्ष्मण गाम्नागे
बल्ल सरकार ढल्ने भयो । अब मजा आउने भयो । सरकार बनेकै दिनदेखि आफूले त भनेको हो, यो सरकार ढाल्नुपर्छ । यो मात्रै होइन, जुनसुकै सरकार पनि यसै गरी ढालिरहनु पर्छ । सरकार भनेकै ढाल्नका लागि हो । अब बन्ने सरकारलाई पनि छिटोभन्दा छिटो ढाल्नुपर्छ । सरकारलाई कहिल्यै पनि आफैँ ढल्न दिनुहुँदैन ।
सरकार नढलेर लामो समय टिक्यो भने के हुन्छ हामीलाई कुनै अनुभव छैन । के थाहा, त्यो एकदमै जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि मानौँ, अहिलेको केपी ओली सरकारलाई लामो समय काम गर्न दिँदा भ्रष्टाचारमा डुब्दै गयो, अक्षम, बदनाम र पतन हुँदै गयो भने त राम्रै हुन्थ्यो तर राम्रा राम्रा काम गरेर, मुलुकको विकास गरेर जनताको मन जित्न थाल्यो भने कत्रो जोखिम हुन्थ्यो ! जनताले उसैलाई बढी मन पराउन थाले भने उसैका दलले चुनावमा जित्न थाल्ला । बहुमत ल्याएर एकलौटी सरकार बनाउला । एकलौटी सरकार भएपछि ढाल्न नसकिएला । कुनै सरकार एक वर्ष, डेढ वर्षसम्ममा पनि ढाल्न नसकिने गरी बलियो भयो भने लोकतन्त्रको के स्थिति होला ?
ल हेर्नूस् जोखिम ! लोकतन्त्रमा त्यस्तो जोखिम उठाउनु हुँदैन । ६ महिना, आठ महिनामा सबैले पालैपालो सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । सबैले पालैपालो आफ्नो झोली भर्ने मौका पाउनुपर्छ । यसकै लागि त त्यत्रो बलिदान गरेर मुलुकमा हामीले प्रजातन्त्र ल्याएको, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएको । त्यसैले जोखिम मोल्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । सरकार ढालिहाल्नुपथ्र्यो, ठीकै भयो । अब मजा आउने भयो ।
सरकार ढल्ने भन्ने कुरा सुन्दै कति आनन्ददायक छ, कति रोमाञ्चक छ । यसै यसै हाम्रा कान ठाडा हुन्छन् । हामी सबै एकाएक सक्रिय हुन्छौँ । सरकार ढल्ने बेलामा कसैले पनि बेरोजगार बस्नुपर्दैन । हामी सबै एकाएक रोजगार हुन्छौँ । गाउँ, टोल, चोक र चौतारी चारैतिर मानिसहरू सबै अरू काम छाडेर जिब्रो फट्कार्न थाल्छन्, विपक्षीलाई ललकार्न थाल्छन् । कर्मचारीहरू गर्दागर्दैका काम छाडेर सरकार परिवर्तनको छलफलमा उत्रिन्छन् । किसानहरूले रोपाइँ छाड्छन् । रोगी, बूढा, बिरामी सबै र्जयाकजुरूक उठेर मन्त्रीहरूको सूची बनाउन थाल्छन् । सेयर बजारको भाउ घटेर के हुन्छ, पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूको भाउ बढेर एकाएक माथि पुग्छ । सत्ता उन्मुख नेता–कार्यकर्ताको फूर्ती झन् माथि चढ्छ । देशमा मात्रै किन, छिमेकी राष्ट्रका राजधानीमा समेत हलचल आउँछ ।
महिनौँसम्म एउटै प्रधानमन्त्री, एउटै मन्त्री देख्दा देख्दा हामीलाई वाक्कै लागिसकेको थियो । नयाँ सरकारको न्यास्रोले सताउन थालिसकेको थियो । बल्ल न्यास्रो मेटिने भयो । हाम्रो इच्छा पूरा हुने भयो । नयाँ सरकार आएपछि अब हामीले नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ–नयाँ मन्त्रीहरू देख्न पाउने भयौँ । नयाँ शपथग्रहण, नयाँ–नयाँ शुभकामना, नयाँ–नयाँ बधाई सन्देशहरू, नयाँ–नयाँ गाडी, नयाँ–नयाँ मन्त्रालय, नयाँ–नयाँ पीए, नयाँ–नयाँ जोगी, नयाँ–नयाँ खरानी । हाम्रा लागि भरपूर मनोरञ्जन प्राप्त हुने भयो ।
अरू हुने त के हो र ! हामी जनताको मनोरञ्जनका लागि भए पनि सरकार ढल्नै पथ्र्यो, ढल्यो । आफ्नै सरकार आफैँले ढालेर भए पनि हामीलाई यस्तो असीम मनोरञ्जन प्रदान गर्ने नायक प्रचण्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
नेपाल, श्रावण ७, २०७३